Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Manchester City Oo Badashey Qorshihii Harry Kane Ee Suuqa, Xaalada Tammy Abraham, Jeremy Doku Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Manchester City oo badashey Qorshihii Harry Kane ee Suuqa, Xaalada Tammy Abraham, Jeremy Doku iyo Qodobo kale
August 13, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Manchester City ayaa diyaar u ah inay bixiso € 150m (£ 127m) si ay ula soo saxiixato weeraryahanka reer England Harry Kane, oo 28 -jir ah, kana tirsan Tottenham . (thguadian)
Everton ayaa ku soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka Napoli Lorenzo Insigne, oo 30 jir ah, ka dib qaab ciyaareedkii uu kula guuleystay Euro 2020 ee Italy. (thesun)
Roma ayaa isha ku heysa weeraryahanka Chelsea Tammy Abraham, oo 23 jir ah, kaasoo aan u muuqan mid ku qanacsan dalabka damaanad qaadka ciyaarta, lambarka sagaalaad iyo mushahar 4 milyan ginni ah, wuxuuna doorbidayaa xulashada kooxaha xiiseenaya sida Arsenal . (Daily Mail)
Kooxda reer London ayaa sidoo kale isha ku haysa xiddiga qadka dhexe ee Lyon Houssem Aouar, oo 23 jir ah, in kasta oo la soo jeediyay inay doorbidayaan inay si joogto ah ula wareegaan xiddiga Real Madrid Martin Odegaard, oo 22 jir ah. (ESPN)
Paris St-Germain ayaa isku dayi doonta inay la soo saxiixato weeraryahanka reer Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, kaasoo ka yimid Juventus xagaaga 2022 si uu ugu noqdo bedelka 22 jirka reer France Kylian Mbappe, kaasoo muddo dheer bartilmaameed u ahaa Real Madrid. (AS)
Xiddiga qadka dhexe ee reer Brazil Philippe Coutinho ayaa lala xiriirinayay inuu ku laaban doono Liverpool oo uu kaga soo biiri doono Barcelona, kooxdii uu ka tagay Merseyside kuna biiray £ 142m bishii Janaayo 2018. Everton, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham iyo Leicester City ayaa dhammaantood lala xiriiriyay 29 -sanad. (Liverpool Echo)
Liverpool ayaa sidoo kale la sheegay inay xiiseyneyso weeraryahanka reer Belgium Jeremy Doku oo ka yimid Rennes, kaasoo ay u badan tahay inay ku dalban doonoto 19 milyan oo ginni £ 38m. (Voetbal24)
Tababaraha Reds Jurgen Klopp, si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in kooxdu “aysan doonayn ciyaartoy badan”. (dailymail)
Real Madrid iyo Paris St-Germain ayaa la socda xaaladda daafaca dambeedka dhexe ee Jarmalka Antonio Rudiger ee Chelsea, iyagoo og in heshiis hordhac ah lala geli karo 28 jirkaan bisha Janaayo. (Sky Sport)
Tottenham ayaa u dhaqaaqi karta daafaca Villarreal ee 24 jirka Pau Torres. (Express)
Crystal Palace ayaa qarka u saaran inay kula tartanto Leeds United baacsiga ay ugu jirto 22 jirka khadka dhexe ee Huddersfield Town Lewis O’Brien. (footballinsider)
Tababaraha Southampton Ralph Hasenhuttl waxaa ka go’an inuu sii haysto 26 jirka qadka dhexe ee England James Ward-Prowse, kaasoo ay doonayaan Aston Villa iyo Tottenham. (football.london)
Manchester United ayaa dooneysa inay amaah ku fasaxdo 19 jirka weerarka uga ciyaara Ivory Coast Amad Diallo xagaagan. (Manchester Evening News)
Juventus ayaa qarka u saaran inay dhameystirto heshiiska 23 jirka qadka dhexe ee Sassuolo Manuel Locatelli, kaasoo Arsenal aad loola xiriirinayay. (Goal)
West Ham ayaa dalab £ 17m ah ka gudbisay daafaca reer Morocco Nayef Aguerd oo 25 jir ah waxaana diiday Rennes. (footballinsider247)
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa weli ku rajo weyn saxiixyo kale ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga. (ESPN)
Weeraryahanka reer Spain Diego Costa, oo 32 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu mustaqbalkiisa ciyaareed dib ugu bilaabo kooxda Atletico Mineiro, isagoo aan ciyaarin tan iyo markii uu ka tagay Atletico Madrid bishii December. (Goal)
Goolhayaha reer Brazil ee 32-jirka ah Neto ayaa laga yaabaa inuu xagaagan si joogto ah ugu biiro Arsenal , laakiin u dhaqaaqis amaah ah ayaa sidoo kale macquul ah. (theathletic)